FARITRA ANDROY :: Miaina tanteraka ao anatin’ny tsy fisian’ny rano ny mponin’i Tsihombe • AoRaha
FARITRA ANDROY Miaina tanteraka ao anatin’ny tsy fisian’ny rano ny mponin’i Tsihombe
Tsy zava-baovao ary tsy misy vahaolana mihitsy. Mbola miaina amin’ny tsy fisian’ny rano fisotro madio sy fanadiovana ary fidiovana ny mponina any ambanivohitr’
i Tsihombe. Rano amin’ny lavadrano izay tena maloto no ampiasain’izy ireo handrahoana sakafo sy atao rano fisotro ary ampiasaina amin’ny fambolena sy ny fiompiana.
“Izahay ihany no manao lavadrano hangalana rano. Efa mandavaka lalina vao misy rano nefa toy ny ranom-potaka ilay izy. Io no rano sotroina aty aminay fa tsy misy ankoatra an’io. Misy mihitsy aza no efa ritra”, raha ny voalazan’ireo mponina.
Misy amin’izy ireo no mandeha kilaometra maro amin’ny fangalana rano amin’ny toerana iray. Very hevitra ny mponina, miron­gatra ny aretin-kibo. Ahiana ho ripaky ny haintany ihany koa ireo biby fiompy. Betsaka amin’ireo mponina any an-toerana no lasa mifindra monina tsy fidiny any amin’ ireo renivohi-paritany, toy ny aty an-drenivohitra sy any Toliara, Toamasina ary an-toeran-kafa, manavotra aina ka mitady zavatra hatao.
“Saika isan-taona dia itrangan’ny kere foana any amin’iny tapany atsimon’ny Nosy iny, ka mila fandraisana andraikitra matotra avy amin’ny fanja­kana amin’izay”, raha ny fitarainan’ireo mponina. Efa betsaka ireo tetikasa nandalo tany an-toerana fa tsy naha­vaha olana mihitsy. “Raha tsy ny rano mihitsy no tonga aty an-toerana dia tsy miova ny fiainan’ny mponina. Vahaolana maharitra toy ny fitarihana ny reniranon’ Ifaho no mety amin’izany fa tsy tetikasa maro sosona”, hoy ny dokotera Sambo, lehiben’ny hôpitaly ao Tsihombe.
FESTIVAL CINEMA ESPAGNOL :: Horonantsary enina halefa maimaim-poana